University of Paris-Sud - Study in France. Waxbarashada Europe
City : Orsay
gaabinta : UPS
Ardayda (qiyaastii.) : 27000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Paris-Sud
Qor at University of Paris-Sud
Sida jaamacadda cilmi leh spectrum balaadhan oo anshax ah,
University of Paris-Sud waxaa si gaar ah loo aqoonsan yahay ee heerka sare ah ee ay cilmi aasaasiga ah, gaar ahaan xisaabta iyo physics. In Sciences Caafimaadka, ay cilmi baaris ayaa natiijada hodan iyo badiyey hal-abuurnimo ku daweyn in tiro badan oo ah beeraha caafimaadka. Its Law, Dhaqaalaha iyo kooxaha Management cilmi baaris ku sameeyaan heer sare ah ee asalka ah ee beeraha sida teknoolajiyada cusub oo hal-abuurnimo. Ugu dambeyntii, tiro badan oo ah mashaariic cilmi-maadooyinka ayaa sidoo kale laga fuliyay beeraha sida isboortiga iyo motricity aadanaha, tusaale ahaan. Dhamaan hawlaha cilmi meel laboratories kuwaas oo la wadaago waayo qaybta ugu ururada ugu waaweyn ee ay ka mid yihiin cilmi-CNRS, Inserm iyo EW, kuwaas oo ku lug ayaa si wanaajiyey sumcad caalamka ku riyaaqay by xarumaha cilmi our.
Jaamacadda Paris-Sud waa caan ah ma ahan oo keliya in ay cilmi-baarista, laakiin sidoo kale ee xadka iyo noocyo kala duwan oo ka mid ah koorsooyinka iyo barnaamijyada ay,
labadaba nidaamo tacliimeed ee Bachelor, Master ee, iyo heerka PhD, iyo tababar farsamo. manhajka Maaddooyin la cilmiga ay taageerayaan cilmi jarida-ku laayeen biiriyo cilmiga cusub inay meel kala duwan oo ardayda ka ku cusub in sanadka ugu horeeya si ay kuwa sameeyo waxbarashada nolosha. Barnaamijyada diirada saaraya baahida bulshada iyo, xataa heer phD, on tababarka ardayda inay soo galaan suuqa shaqada. The University ee ku nool gaar ah oo deegaanka ka shaqeeya siisaa ardayda iyo saynisyahano dhalinyarada xaaladaha suurtagalka ah ee ugu isuna gobolka-of-the-art aqoonta iyo xirfadaha iyo nolosha ardayga ku riyaaqayaa.
Sida hay'ad la xididdada ee bulshada,
Jaamacadda Paris-Sud beeraysaa xiriir dhow la leh warshadaha iyo kordhinaya shaqo abuurka iyada oo aqoonta ee ay cilmi ay. University ayaa sidoo kale fuliya hawlaha kala duwan outreach. Kuwani waxay noqon karaan cilmiyeed iyo farsamo, ama farshaxanka, ama isku-dar ah labada, in line la “Science-Dhaqanka-Society” hawlaha kuwaas oo hadda la horumariyo. Sidoo kale bulshada jaamacadda, oo ka kooban shaqaalaha iyo ardayda, dhagaystayaasha diirada noo ka mid ah dugsiyada iyo dadweynaha guud.
Waxay ku taallaa in jawi ka duwan sayniska,
Paris-Sud University, wada jir ah ula dhan wada-hawlgalayaasha kale ee waxbarashada iyo cilmi-baarista sare ee degaanka, waxaa ka shaqeeya in la kordhiyo aragti caalami ah iyada oo loo marayo mashruuca University Paris-Saclay ah, taas oo waa ciyaaryahan weyn. Isla mar ahaantaana, qorshaha barnaamijka dhismaha ballaaran ku arzaaqnayna wax University Paris-Sud fursad gaar ah si loo adkeeyo ay meel ka mid ah jaamacadaha adduunka ee keentay iyo in la sii xoojiyo in ay racfaan ardayda ee jaamacadda, cilmi, iyo shaqaalaha farsamada iyo maamulka. Kuwani waa kuwa ku mudan credit ee sharafta iyo wanaagga ee Paris-Sud University.
Kulliyadda Law, Dhaqaalaha iyo Maamulka
Jean Monnet Kuliyada bixisaa waxbarasho iyo tababar ee sharciga, dhaqaalaha iyo maamulka inay ka badan 6,000 ardayda laba goobood, shaabadood – Fontenay-aux-GUUSHII iyo Orsay.
Koorsooyinka waxaa mustaqbalkiisa-oriented la saarayo on sharciga iyo maamulka la dabaqay. Qaar ka mid ah kuwaas oo loogu talagalay si loo daboolo baahiyaha kulliyadaha kale, dugsiyada iyo machadyada (caafimaadka sayniska, deegaanka iyo cayaaraha).
Research diiradda saarayaa sharciga heshiiska, Sharciga cusub ee technology, sharciga dadweynaha, sharciga xeerkoodu, hal-abuurnimo iyo network dhaqaalaha iyo maareynta ururka.
The Institute of Studies Garsoorka tareenada ardayda gelitaanka bar Versailles iyo School Qaranka ee Magistrates (ENM).
4,200 ardayda waxaa loo tababaray ee Paris-Sud Kuliyada Daawada goobaha kala duwan: Bicetre ah, Paul Brousse iyo Antoine Béclère Hospitals, Gustave-Roussy Machadka, The Xarunta Qalliinka Marie Lannelongue, Vallée Foundation, iyo Koonfurta Ile-de-France Hospital Center.
Iyo sidoo kale degrees in daawo, Kulliyadda waxay bixisaa lix digrii iyo koorsooyinka Master ee saddex Doctoral Dugsiyada, Dugsiga Caafimaadka Dadweynaha a, a Department of Ethics, iyo Waaxda Waxbarashada ee Nursing.
Research u qaybsan yahay cilmi-baaris caafimaad oo, sameeyay in isbitaalada; cilmi aasaasiga ah, fuliyay laboratories; iyo cilmi translational, sida buundada u dhexeeya labada.
Shanta meelaha gudaha fiirsashada Biology-Health Science yihiin: kansarka, Biotherapy / immunotherapy / badalida, Physiopathology / Bartilmaameedyada daweynta, Caafimaadka Dadweynaha / Faafa iyo Medical sawirka.
The Kuliyada campus Farmashiyaha, oo daboolida 90,000 m2, waa in Châtenay-Malabry. Waxay hoy u tahay ku dhawaad 3,500 ardayda, kuwaas oo 450 yihiin ka dib markii sanadkii la soo caadi ugu horeysay ee barashada cilmiga sayniska caafimaadka. Qalin shaqeeya filan kartaa in shaqo la helo farmasiyada, farmashiyayaasha, warshadaha, biology iyo isbitaalada.
Cilmi diiradda aasaasiga ah waa hal-abuurnimo ku-daweyn, qaadeen by kooxaha iyo laboratories aqoonsan ay heer sare ah ururada ugu waaweyn ee cilmi-baarista sida CNRS iyo Inserm, iyo Wasaaradda Research.
Paris-Sud Kuliyada Farmashiyaha waa mid ka mid ah xarumaha ugu weyn cilmi farmashiyaha tacliimeed ee France.
Waxaa jira in ka badan 9,000 ardayda ee Kulliyadda Sayniska ee Orsay, xisaabta, sayniska kombiyuutarka, physics, chemistry, biology, Dhulka sayniska iyo cilmiga Caalamka.
The kooban Kulliyadda 47 shaybaarrada cilmi, iyaga ka mid ah ugu ururka la CNRS, Inserm, Inra, Inria iyo Institute Curie ah.
Sanadihii la soo dhaafay heer sare ah ay cilmi baaris in xisaabta ayaa lagu abaal by laba biladood oo Fields, abaalmariyey Wendelin Werner in 2006 iyo Ngo Bao Chau Daabacaadda 2010; iyo cilmi baarista ee physics ayaa aqoonsan Nobel Prize, abaalmariyey Albert Fert in 2007.
The Kuliyadda Sayniska waxa uu ku yaalaa wadnaha ee campus Orsay ah, site gaar ah oo ka mid ah beer botanical.
Kuliyada Sport Sciences
Iyadoo si dhow 1,100 ardayda, Kulliyadda Sports Sciences (STEP) waxay bixisaa tiro ka mid ah koorsooyinka mustaqbalkiisa-oriented ardayda hore u leedahay shahaado, iyo sidoo kale shahaadooyinka xirfadaha iyo shahaadooyinka xirfadaha ee Master.
Research diiradda saarayaa nafsi ah, geeddi socodka nafsaaniga ah oo cilmiga ka dambeeya motricity aadanaha oo ka ciyaaraan qayb hagaajinayo kartida cayaaraha.
Waa Kulliyada kaliya ee France in ay School Doctoral ah “Science ee Sport iyo Motricity Human”.
IUT Cachan (Machadka University of Technology)
Cachan IUT ka badan 900 ardayda, tababartayaasha, iyo ardayda waxbarashada sii socota ee Electrical Engineering, Industrial barashada Kombiyuutarka, Farsamo Engineering iyo Computer-Integrated Warshadaha.
Qalin waxaa loo tababaray in ay soo galaan suuqa shaqada sida farsamo xirfad ama injineerada in beerihii aeronautics, gaadiidka, tamarta la cusboonaysiin karo, maareynta farsamada dhismaha, domotics, isgaarsiinta, instrumentation Biomedical, biomechanics, wax soo saarka, dayactirka, logistics, robotics iyo wax soo saarka warshadaha ganacsiga.
Ardayda waxaa taageera awood u leeyahay waxbaridda xirfad tacliin heer sare iyo xirfadlayaasha warshadaha.
IUT wuxuu ku qalabeysan yahay saddex dhufto ee gobolka-of-the-art technology.
Sceaux IUT (Machadka University of Technology)
Sceaux IUT tababbarayaa ka badan 1,500 ardayda ganacsiga iyo maamulka maamulka, maamulka, iyo ganacsiga iyo iibka injineernimada. Its sumcad fiican waxaa lagu wanaajiyey xiriir dhow waxa uu xusay in la warshadaha iyo ganacsiga. manhajka ay shaqo-diiradda la baraa by awood tacliimeed ee dhaqaalaha iyo maamulka iyo khubaro ka dunida ganacsiga.
A Xarunta Waxbarashada dalabyo tababar dheeraad ah, waayo, darajo iyo shahaadooyinka kala duwan.
Orsay IUT (Machadka University of Technology)
Orsay IUT waa hay'ad keentay tababarka ee kiimikada, sayniska kombiyuutarka, iyo physics la dabaqay iyo tallaabooyinka.
Qalabaysan ku dhufto ee technology sare ugu, waxay hoy u tahay 1,100 undergraduate, tababartayaasha iyo ardayda waxbarashada sii socota. IUT ayaa bixinaya layliyo daraasadda / shaqada intii afartan sannadood ah, in xiriir dhow ay la warshadaha mahad.
Research ayaa la sameeyaa saddex laboratories: ka Laboratory ee qalabku Falanqaynta kelli iyo Tabaha (leti); Falanqaynta of Change Dhaqaalaha, Technology Information, iyo Shirkadaha (XAFIISKA); iyo Laboratory of Interfaces iyo geedi socodka Kala (INTERSEP).
Sanad walba ka weyn 650 ardayda ay iskuulka ee School of Engineering ee Paris-Sud University. Mid ka mid ah sifooyinka kala duwan ee injineerada Polytech waa in ay tababar oo dhan ay ku jiraan xiriir dhow la leh dunida ka mid ah cilmi, sidaas Yeelashada aqoonta goynta-ku laayeen ee beeraha technology sare (korontada iyo nidaamyada gundhig, injineernimada korontada, injineernimada computer, qalabka injineerinka iyo phototonics), wada jir ah ula isgaadhsiinta, afka, iyo xirfadaha maamulka baahida kasta injineer.
Waxa intaa dheer in manhajka caadiga ah, halkaas oo ardaydu waa bilaabi waxbarashada ka dib markii ay dhameeyaan tababarka waxaa hore laba sano, Paris-Sud Polytech sidoo kale bixisaa fursad si aad u hesho shahaado by isku waxbarasho tacliinta iyo layliyo, ama iyada oo loo marayo barasho, ama haddii kale via barnaamijyada waxbarasho dheeraad ah.
Ka dib markii Dagaalkii Adduunka 2, si weynna u kobcay physics nuclear iyo kimistari macnaheedu yahay in cilmi-baaris dheeraad ah oo Sheelare oo awood badan loo baahan yahay, taas oo loo baahan yahay goobo badan oo. The University of Paris, Normale hôtelière Supérieure iyo de kulliyadda France ayaa dhan raadinayay meel dhow Orsay, xagga koonfureed oo dalka Paris.
Parc de Launay ee Orsay (160 hektar) lagu iibsaday by Gobolka.
dhismaha bilaabay on the Institute of nukliyeerka Physics (Nuclear Physics Institute) iyo xawaaraha toosan ee Laboratory (Toosan xawaaraha Laboratory) by naqshadeeyaha ugu Seassal, hoos jihada sayniska ee Joseph Peres, Irène iyo Frédéric Juliot-Curie iyo Hans von Halban.
The College de France ee cyclotron, dhisay 1937, waxaa u dhaqaaqay Orsay.
Alwaaxda hore ee Sheelare cusub Faransiis bilaabay shaqeeya (ah 157 MeV synchro-cyclotron oo toosan xawaaraha).
The Kuliyadda Sayniska ee Paris wareejiyay qaar ka mid ah hawlaha baridda ay Orsay. Kororka degdeg ah ardayda keentay in Xarunta Orsay u noqday madax banaan on March 1-deedii, 1965.
The University of Paris-Sud 11 waxaa la aasaasay markii xarumaha at Orsay, Châtenay-Malabry, shaabadood, Cachan iyo Kremlin-Bicêtre ayaa ku biireen.
Tan iyo markii ay 1970
campus Orsay ayaa bilaabay in ay ballaariso bannaanka Moulon iyo laboratories cusub ayaa la dhisay. Ku dhowaad dhammaan oo ka mid ah qayb ka mid ah Paris-Sud University ahaayeen, inkastoo dhowr ah ayaa ka badan si gaar ah lala CNRS ama xitaa jaamacadda Paris VI.
Sababtoo ah ee u dhow ee Paris-Sud University in Atoomikada Institute Tamarta (EW) iyo laboratories CNRS ee GIF Suur Yvette, machadyada iyo laboratories badan, iyo sidoo kale dugsiyada waxbarsho oo wanaagsan sida Polytechnique, HEC, ESC, ENSTA iyo kuwa kale oo sidoo kale goobta soo gaadhay. Sidaas darteed, de Vallée ku Chevreuse waxa uu noqday mid ka mid ah goobaha muhiimka ah iyo si fiican u yaqaan inta badan ee Europe cilmi sayniska.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Paris-Sud ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Paris-Sud rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Paris-Sud
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Paris-Sud.
miinooyinka ParisTech Paris
Hôtelière normale supérieure de Lyon Lyon